August | 2017 | Radio Himilo
Tottenham oo heshiis la gaartay laacibka Fernando Llorente ee Swansea.
radio himilo August 31, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 44 Views
Muqdisho – Tottenham ayaa heshiis kala gaartay kooxda Swansea weeraryahankeeda Fernando Llorente, sida ay warineyso Sky. Sky Sports News ayaa fahamsan inay Spurs bilowday wada-hadallo ay kula soo saxiixanayso 32 jirkan Talaadadii, isla markaana waxay heshiis la gaartay Swansea shalayto. ...
Riyad Mehrez oo xulkiisa ka helay fasax uu kusoo dhameeyo ka tegistiisa Leicester.
radio himilo August 31, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 50 Views
Muqdisho – Riyad Mahrez ayaa ogolaansho ka helay Algeria si uu uga tago xerada tababarka xulka qaranka una dhamaystiro ka tagista Leicester. Xiriirka kubada cagta Algeria ayaa ku dhawaaqay in Mahrez loo ogolaaday inuu ka tago kooxda qaranka Algeria islamarkaana ...
radio himilo August 31, 2017	Features, Wararka Leave a comment 47 Views
Muqdisho – Bai Yan, qalbi-jilcane ku nool Hangzhou ayaa dhawaantan soo jiitay indhaha bulshada caalamka kadib markii la ogaaday in 7 sano ee lasoo dhaafay uu lacag dhan $150,000 ku bixiyay daryeelka iyo xanaanaynta Eeyaha howl-gabka noqday halkaas oo kuwii lasoo shaqeeyey ay ...
radio himilo August 31, 2017	Features, Wararka Leave a comment 55 Views
Muqdisho – Wiil yar ayaa naftiisa baray in dheeshu mararka qaar ay dhimashada u dhowdahay kadib markii muddo saacado ah uu ku dhex xirmay qasaaladda dharka lagu dhaqdo, marka loo eego booliska dalka Ukraine. Booliska Kharkiv ayaa sheegay in loogu ...
radio himilo August 30, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 47 Views
Muqdisho – 18-jirkan weerarka ka ciyaara ayaa ku biiri doona kooxda caasimadda isaga oo kaga imaan doona naadiga Monaco qaab amaah ah, kooxda ay Ligue 1 kawada dhisan yihiin ayaa bixin doonta €180 million oo lacagta Yurub ah xagaaga xiga. ...
Alex Oxlade-Chamberlain oo Chelsea ka doorbidaya jecelna Liverpool.
radio himilo August 30, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 37 Views
Muqdisho – Arsenal qadkeeda dhexe, Alex Oxlade-Chamberlain ayaa hoos u dhigaya fursadda uu uga mid noqon karo kooxda heysata horyaalka Premier League, sida ay warinayaan ilo wareedyo ay heleyso Sky. Gunners ayaa kala heshiisay xiidigan heerka caalami ee reer England ...
Chelsea oo adduun dhan £15M Swansea kaga doonayso laacibka Llorente.
radio himilo August 30, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 42 Views
Muqdisho – Chelsea ayaa ku dhow saxiixa laacibka Fernando Llorente ee kooxda Swansea City oo adduun dhan £15 million lagu heli karo heshiiskiisa, sida ay fahamsan tahay Goal. Swansea ayaa si kastaba iibin doonin laacibka Llorente ilaa ay helaan baddal ay kaga kaaftoomaan. ...
Gunners-ka oo City ka diiday dalab £50M oo Alexis ay ku doonayso.
radio himilo August 30, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 36 Views
Muqdisho – Arsenal ayaa iska diiday dalab ku kacaya £50 million oo Manchester City kaga doonayso laacibka Alexis Sanchez, sida ay fahamsan tahay Goal. Si kastaba, ilo ku dhow lakabyada ugu sarreeya kooxda ayaa Goal u sheegay inay ku niyad-weyn yihiin ...
Chelsea iyo Atletico oo aan wali meel isla dhigin heshiiska Costa.
radio himilo August 30, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 31 Views
Muqdisho – Atletico Madrid waxay u muuqataa inay sugayso saacadaha ugu danbeeya ee suuqa si ay u hanato saxiixa laacibka Diego Costa xilli ay ku fashilantay inay bixiso adduunka uu kaga hayaami karo naadiga Chelsea. Kooxda Stamford Bridge ayaa laacibkan ...
radio himilo August 29, 2017	Features, Wararka Leave a comment 68 Views
Muqdisho – Gamaanku wuxuu had iyo jeer ahaa qeyb kamid ah nolosha insaanka – u eegis la’aan waqtiga iyo casriga lagu jiro. Wuxuu lahaa qeyb weyn oo noloshu la’aantiis aysan suura-gal noqoteen. Hayeeshe qarniyadii danbe oo adeegsiga gaadiidka afar-lugoodka uu ...